ShazamKit wuxuu u oggolaanayaa horumariyeyaasha inay dhexgalaan Shazam barnaamijyadooda | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | 19/06/2021 13:00 | macruufka 15, WWDC 2021
Mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn marka la eego barnaamijyada waa shaki la'aan Shazam. Barnaamijkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad garatid waxa heesta ah ee la maqlo adoo duubi kara qayb yar oo xitaa dhawaaqa asalka ah. Tan waxaa lagu gaadhay mahadsanid tiknoolajiyad isbarbar dhig ah oo udhaxeysa buugga weyn oo leh malaayiin heeso ah. Sannadkii 2017-kii Apple ayaa iibsatay shirkadda tan iyo markaasna waxay ku darsatay dhammaan tiknoolajiyaddeeda nidaamyada ay ku shaqeyneyso. Hadda waxaa la joogaa waqtigii laga qaadi lahaa wixii ka baxsan macruufka iyo iPadOS adoo bilaabaya xirmada horumarinta ShazamKit, taas oo u oggolaanaysa horumariyeyaasha ku hirgeli tikniyoolajiyadda barnaamijyadaada dhexdeeda, xitaa iyada oo ay la socdaan kuwa horumariya Android.
Apple wuxuu abuuraa xirmo horumarineed si loo aqoonsado muusikada: ShazamKit
Ku kobci howlaha barnaamijyadaada adoo aqoonsanaya muusikada isla markaana si aan kala go 'lahayn ugu xirmaya isticmaalayaasha buugga muusikada ee Shazam ShazamKit wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kobciso waayo-aragnimadaada barnaamijka adigoo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ogaadaan magaca hees, cidda qaaday, nooc, iyo waxyaabo kale oo badan. Baro halka ciyaarta laga helay heesta si aad ugala mid dhigto waxyaabaha ku jira khibradaha isticmaaleha.
Este xirmada horumarinta Kaliya maahan Shazam iyo garashada muusikada. Way sii socotaa: waxay qaadaysaa tikniyoolajiyadda uu Shazam adeegsado loogu talagalay barnaamijyada horumarinta. Si kale haddii loo dhigo, horumariyaha ayaa hadda awood u leh inuu abuuro maktabado codkooda u gaar ah kuna dhex daro nidaam u eg Shazam. Si aad shakhsi uga dhigato khibrada dalabyadaada.
Intaas waxaa sii dheer, muhiim maahan in muusikada lagu ciyaaro banaanka oo loo isticmaalo mikroofoonada qalabka si loo duubo, laakiin halkii waxaa lagu duubi karaa gudaha, horusocod ay ku hirgelisay Apple noocyadi ugu dambeeyay ee nidaamyadeeda shaqo.
Iyadoo la adeegsanayo dhaqdhaqaaqan bilowga ah ee ka socda xirmada ShazamKit, Apple wuxuu dhammeystiray safar dheer oo awoodsiinta teknolojiyadda ah iyo ballaadhin ah oo ah tiknoolajiyad ku baxday Apple-ka Weyn in ka badan 400 milyan oo doolar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » ShazamKit wuxuu u oggolaanayaa horumariyeyaasha inay dhexgalaan Shazam barnaamijyadooda